Warqad Furan Oo ku Socota Madaxwayne Muuse Biixi. Qalinkii Jiif Caaqil Garaad Muuse Ceelaabe. | Awdalmedia.com
Ku : Madaxweynaha Somaliland, Hargeysa.
Og: Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Hargeysa.
salaan kadib, anigoo ah Jiif Caaqilka Beesha Bahabar Muuse, magacayguna yahay Garaad Muuse Ceelaabe Abaar, waxaan kuu soo gudbinayaa dacwad aan kaga cabanayno beesha Jibriir Abokor oo mudo 27 sano ah uu naga dhexeeyo muran la xidhiidha deegaanka dhulbeereedka Caadda iyo nawaaxigeeda oo hoos taga degmada Gabiley.
Mudane Madaxweyne, markii adiga iyo madaxweyne ku xigeenkaaga Md. Cabdiraxmaan Saylici aad ku jirteen ololihii doorashadii guushu idiinku raacday ee G/Awdal aad noogu timaadeen, waxaan ka mid ahaa odayadii dhaqanka beelaha Maxamed Case ee Baki idiinku sameeyey hadhimo sharafeedka, shirkana aad Kula yeelateen halkaas. Ku darsoo, weliba waxaan ahaa Jiif Caaqilkii kelidii u istaagay ee idiin soo bandhigay arrimaha khuseeya deegaanada lagu muransan yahay. Adiguna dhankaaga waxaad ku ballanqaaday maalintaasi "hadii aan doorashada ku guulaysto, waxaan gogol ay ku wadahadlaan u dhigi doonaa dhinacyada muranka deegaamadu ka dhexeeyaan."
Ugu dambayn, Mudane Madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa in aad si degdeg ah noogu fidiso gogol aan ku wadahadalno annaga iyo beesha Jibriir Abokor oo mudo 27 sano ah uu naga dhexeeyo muran la xidhiidha deegaanka dhulbeereedka Caadda iyo nawaaxigeeda oo hoos taga degmada Gabiley.
Jiif Caaqil Garaad Muuse Ceelaabe